andaohiresakaobjetfahaiii [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/c/c1cc28bc9e0e509c814aa1df21d4eef6.xhtml failed
Andao hiresaka Objet III
Alohan’ny hanohizana ny tafa dia tsara aseho eto aloha zany ilay niafaran’ity ohatra naorina tamin’ny fijery Objet ity. Toy izao zany ny fiovoaran’ilay classe noforonintsika noheverina hanaovana Adisanina ihany aloha
/* Hanao adisanina karazan-zavatra roa isika eto : soratra fotsiny ny voalohany ary * * isa reel ny faharoa
Oay, ary toa lasa be voakabolary nilatsadatsaka ho azy izy zany e !
Aleo tokoa aloha anaovana “prezantasio” ry zareo ireo, sao manahirana any aoriana kely any ary e:
Tsotsotra no anaovako ny vitsivitsy amin’izy reo:
public, private : fanovana fomba fampiasana (modificateur d’acces) n’ireo Objet noforonina tamin’ny famaritana ialohan’ireo soratra voatokana ireo;
ka raha public : dia azon’ny Objet hafa ety ivelany zany ny mampiasa azy;
raha private : dia izay miray fonosana classe aminy ihany no mahazo mikirakira azy.
Misy koa ny protected : ka io dia mitovitovy amin’ny private ihany, saingy afaka mikirakira azy koa ireo Objet noforonina tamin’ireo classe zanany rehetra, na zafiafiny, sns ... Fampiasana kely ary raha izay no izy :Inona no mitranga raha ohatra ka solointsika hoe:
private ZavatraAzoKajiana(Object sandaHafa)
ilay constructeur nofaritana teo amboalohany tao anaty classe ZavatraAzoKajiana ??.
Eto amin’ity ohatra ity aloha dia tsy hisy akony amin’ilay vokatra avoakan’ilay komandintsika io fanovana io, fa hanome vokatra marina ihany izy ! Saingy raha ohatra ianao mikasa ny hampiasa io classe io (te-hanao reutilisation zany) hanaovana adisanina any anaty classe hafa hoforoninao aoriana dia tsy hanaiky mihitsy ny JVM ny hanoratanao ny andalana soratra anaty praograma hoe :
ZavatraAzoKajiana zavatra = new ZavatraAzoKajiana ("Infogasy "); // ohatra eto
Ary na mbola eo amin’ny compilation aza dia efa misy laza diso hitranga.
Ny antony : satria mantsy efa voafaritra tsy misy mahazo mamorona Objet , raha tsy iray fonosana amin’ilay classe namaritana io constructeur private io. Fampiasa ihany anefa io constructeur private io saingy fampiharana voatokana toy ny famoronana Objet voafetra mafy ny isany sy ny fisiany (toy ny Serveur isan-karazany, ireo Objet tsy mahazo miforona ankoatra ny IRAY ihany : singleton no fiantso azy, sns.)
class : Io ilay famaritana ny anaran’ilay classe ny sy rafitra hananan’ilay Objet izay ho foroninao avy aminy; ka raha tsikarintsika dia misy rafitra telo no mety ho hita ao, fa tsy voatery ho feno io isa io amin’ny classe haorinao, fa ny filana azy ihany no mametra izay :
Ireo toetra manokana hananan’ireo Objet; attribut no fiantso azy
Ireo hetsika na methode mahazatra, azo atao amin’ireo Objet na azony atao koa.
Ilay hetsika manokana antsoina hoe main, izay mirakitra ny varavarana hidiran’ny JVM rehefa hampihodina ny praogramanao izy, sy handaminanao ny fizotran’ny asa asainao hataon’ireo Objet foronina isan-karazany.
Object : io dia raiben’ny classe rehetra ao anatin’ny Java : na ireo ao anaty ny API-ny Sun io na izay foronin’ny mpamorona Objet Java rehetra eran-tany. Ho an’ny tontolo Java moa dia nofaritin’ny Sun fa iraika ihany no Ray Superclasse azo fidian’ny classe rehetra izay foronina (tsy misy zany ny atao hoe : heritage multiple), fa raha te-hampiasa ny tombotsoa azo avy amin’io toetra iray io amin’ny Java dia an-kolaka no anaovana azy amin’ny alalan’ny atao hoe: interface.
Ka izay zany no antony namaritana eto amin’ity ohatra ity hoe Object no karazana sanda omena ireo te-hatao Adisanina rehetra !!
Zany hoe tsy voafetra mihitsy zany ireo zavatra tiana hatao adisanina, no antony namaritana azy toa io.
static : raha hazavaina tsotra ny static ao anatin’ny tontolo Objet ny Java dia ireo Objet rehetra tsy mila fiantsoana Constructeur dia afaka misy sy mihodina avy hatrany. Raha halavaina ny fanazavana dia izay no antony mampihodina avy hatrany an’ilay hetsika main avy hatrany eo ambonin’ny JVM, raha vao miantso ny komandy java ZavataraAzoKajiana ianao. Fampiasa matetika koa io fanovana static io , satria manamora ny fampiasana ireo kajy maro na asa antselika maro (utilitaires) tsy mila akory fiantsoana Constructeur amin’ny alalan’ny new mahazatra ny Objet. Ohatra ao anaty Java zao raha hiantso hetsika ao anaty classe Math ianao (mpikazy math marobe): Math.random() dia mamoaka avy hatrany isa reel antsapaka (0<1), new Math() zany tsony ohatra.
Raha voamarikao tokotrany dia toa tonga dia mandeha hoa azy ilay hetsika mamoaka ny valin’ilay ohatra noraisintiska teo aloha io eny amin’ny ecran (sortie standard); tamin’ny alalan’ny soratra programa :
static zany ilay attribut out ao anaty classe System ao amin’ny API-ny Sun.
Raha fintinina ny amin’ity fampidirana dia izao no azo atao fijery ankapobeny raha vao manorina classe-na Objet toa io ohatra io, ary mety ho maro izireo no miara-miasa ao anaty praogramanao:
Ny classe no tsy maintsy aorina tsara mba ho afaka mamaritra tsara ireo teozavatra na sehatra tianao ho atao amin’ny alalan’ny vaha-olana informatika (classe).
Tsy maintsy apetraka tsikelikely amin’ny alalan’ireo hetsika na methode ao anatin’ireo classe ny fomba fiasan’ireo Objet na ao anatiny manokana na amin’ny Objet hafa ety ivelany. Izay ilay famaritana ny anjara andraikitra apetraka amin’ireo Objet tsirairay (responsabilite).
Ireo classe-na Objet zany dia naorina mba hanana fomba raikitra ifandraisany amin’ireo Objet hafa noforonina na efa misy ka tianao hiarana miasa (collaboration) : Raha nandinika aho amin’ny Java dia ireto no mety fomba fiaraha-miasa eo amin’ireo classe mety aorinao :
Amin’ny alalan’ny fifandovana (heritage)
Amin’ny alalan’ny fifandrimbonanana (composition), misy miantso koa hoe: aggregation na association
Amin’ny alalan’ny fifandrakofana na antsoina hoe : classe interne (inner class)
Ny tsara anaovana andrana maro moa raha ny fandinihakao azy dia hoe: mitady fisokajiana ny tsara sy mahomby amin’ireo fiaraha-miasa ireo eo amin’ny karazana asa tiana hitadiavana vaha-olana informatika ifandrimbonan’ny Objet maro !!!!.
Ary farany amin’ity “prezantasio” tsotsotra ity dia tsara koa ny manamarika fa ny hetsika famoronana Objet moa rehefa miantso ireo Constructeur no atao hoe: Instanciation ary izay no mahatonga ny famaritana hoe ny Objet dia instance-na classe iray.
andaohiresakaobjetfahaiii.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43